umshini we-pellet wotshani,utshani pellet mill ukuthengisa okwenza feed kanye uphethiloli
Amandla:30kw noma i-37kw izigaba ezintathu
Ikhono:900~ 1200kg / h
Udosi we-pellet Straw luhlobo lokucindezela ama-pellet asetshenziselwa ukwenza ama-pellets ngezinto ezenziwe nge-biomass ngezinhloso zokushisa. Izinto ezingavuthiwe zingaba utshani bukakolweni, utshani belayisi, nezinye izinto ezifanayo ze-agro.Straw igama elijwayelekile elisetshenziselwa ukubhekisa ezinsalela ezisasele ekuvuneni izitshalo zokusanhlamvu ezifana nelayisi, ummbila nokolweni phakathi kwabanye. Le nsali ebalulekile yezolimo ithandwa kakhulu eYurophu lapho kulinganiselwa khona 23 kukhiqizwa amathoni ayisigidi unyaka ngamunye ngonyaka 15 ithi. Ama-pellets ama-Straw yimikhiqizo ekhethekile ekhiqizwa kusuka otshanini futhi inezinhlelo zokusebenza ezisukela ekukhiqizeni ukushisa kuya kokuphakelayo kwezilwane nokulala kwezilwane phakathi kwabanye. Ukuze wenze pellets kusuka utshani obuluhlaza, izinqubo eziningi kumele zenziwe. Lokhu kungenxa yokuthi izinsalela zoqobo zakhiwa amakhompiyutha ahlukile afaka iseli (80-90%) futhi lumen (10-20%). Ukwakheka kwangaphakathi kufaka phakathi i-silica kanye ne-extracatives konke okungamanzi okuncibilikayo. Nansi incazelo ebanzi yesinyathelo ngesinyathelo yokuthi ungawenza kanjani ama-pellets enotshani.
Ungawenza Kanjani Ama-Straw / Grass Pellets?
★ Ukulungiselela izinto ezingavuthiwe
Inqubo yokuvuna ishiya utshani obuxutshwe nezimbotshana nezinye izinto ezingaziwa njengamatshe, izinsimbi nopulasitiki. Lezi zingxenye zakwamanye amazwe zinamandla okulimaza ukugaya futhi ziphinde zehlise ikhwalithi ye-pellets. Ngakho-ke kufanele zisuswe.
I-Straw biomass ngokuyisisekelo yinto efana ne-tube edinga ukuchobozekwa ngosayizi oludingekayo ongasetshenziswa ezinhlelweni ezishiwo ngaphezulu.. Ukugaya ikakhulukazi kuhlanganisa ukusika nokunquma umhlanga ubukhulu obufanele busetshenziswe emishini yokuhambisa.
Le nqubo yokwenza ama-pellets otshani / wotshani ivame ukudlulwa kepha isabalulekile ukusho njengengxenye yokwakheka kotshani. Kudotshwa utshani obuqukethe cishe 15% okuqukethwe komswakama okulungele ukukhiqiza ama-pellets. Lapho kusetshenziswa uthuli luyasetshenziswa, bese yomiswa ingezwa inqubo.
Lokhu ngokuyisisekelo inqubo yokwandisa ubulukhuni botshani obusezingeni elifunayo. Kubandakanya ukusetshenziswa kwesifutho noma amanzi kanye nama-ejenti abophayo nezithasiselo. Isimo siyadingeka ukuze kufinyelelwe izinga lokushisa elifanele elivumela ukungasebenzi kahle nokuncibilika kwe-lignin (etholakala notshani obuluhlaza) ukusebenza njenge-ejenti ebophayo. Ukwanda kobunzima kuvimbela ukukhahlazeka ngokweqile lapho kufakwa ipellethi.
Isigaxa se-Straw / utshani be-pellet yisigaba esikhulu sokukhiqiza ama-pellets otshani. Ngesikhathi lokhu kufakazelwa, cabanga ngezinto zokuqukethwe komswakama otshanini,amandla e-fiber, usayizi wezinhlayiyana kanye nezihlanganisi zemvelo. Zonke lezi zithonya ikhwalithi ye-pellet. Kubalulekile futhi ukuvikela ukwaphulwa kwe-pellet, ukushisa ngokweqile kanye ne-pellet kufa. Lezi zinselelo zingaholela ekonyuseni izindleko zamandla, ukulimaza ummbila we-pellet yotshani kanye nekhwalithi ye-pellet engeyinhle. Ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa utshani bekhwalithi ephezulu futhi usebenzise ama-pellet amakhulu afile ukukhulisa ubude bokucindezela nokukhiqiza ikhwalithi enhle.
★ Ukuphola Nokuhlola
Ngemuva kokuxebula, imicibisholo ngokuvamile izoshisa futhi ithambe. Ngemuva kwalokho kufanele ziphonswe phansi ukuze kutholwe ubulukhuni obufiselekayo ngenkathi kucolisiswa izinhlayiya ezinhle. Umkhiqizo wokugcina uzobe wehlise okuqukethwe komswakama nokho obonisa ukukhuphuka kwabantu ngobuningi. Umswakama uvame ukwehliswa kusuka ku 15-20% kuya ngezansi 10% ngenkathi ukushuba kukhuphuka kusuka 130 cishe 600 kg / m³.
Yini Izinto Ezihlanzekile ezingasetshenziswakwa zibe ngama-pellets otshani / wotshani?
Kukhona ukusetshenziswa okubanzi kwezinto ezingavuthiwe, njengokhuni, sawdust, utshani, amakhoba, ukushefa kwe-bamboo, amagobolondo amantongomane, isikhwama, i-alfalfa nezinye izinto ezingavuthiwe, njll. Zonke izinhlaka zamahlathi nezolimo zingenziwa kumaphakethe amancane wokudla noma kaphethiloli. Kepha izinto ezahlukahlukene zinezicelo ezihlukile zokuswakama nosayizi. Ngokuvamile, umswakama wezinto ezingavuthiwe ususondele 15%. Ngaphansi kwalesi simo, pellets ezikhiqizwa zizoba nekhwalithi ephelele. Kodwa izinto zokwakha okune-lignin noma ushukela wazo eziphakeme zizodinga umswakama omncane. Ngosayizi wezinto zokusetshenziswa, kufanele kungabi ngaphezu kobubanzi bezimbobo zokufa. Ngokwesibonelo, uma ububanzi bomgodi ofile ungama-6mm, kanti usayizi wezinto zokusetshenziswa ususondele ku-8mm, kuzoba nokuqongelela noma ukulimala ngaphakathi kwesigayo se-pellet. Noma yini ongayicabanga ngezinto eziluhlaza, mill yethu biomass pellet kungakusiza ukufezekisa isifiso pelletizing.
Izinzuzo zeStraw / Grass Pellets
1. Ukukhula nokusetshenziswa kwenyama kuthonywa kakhulu izinkathi zonyaka. I-forage ijika ibuphuzi futhi iphethe izakhi zomzimba omncane ebusika . Noma kunjalo, faka zikhula zinamandla ngezakhi zomzimba eziningi ukuze imfuyo ingazidli ngezikhathi ezifudumele. Ngakho, ukuze usebenzise ngokugcwele utshani ngenkathi efudumele ukwenza umphumela ugcwaliseke, imfuyo nenkukhu zingondliwa ebusika ngamapeleti wotshani agcinwe lapho sekhekiwe, yomisa, Ukuchoboza.
2. Izinga lokuguqula eliphakeme. Ukondla imfuyo nezinkukhu ngama-pellets otshani obusika ebusika, singathola inyama eningi, iqanda nobisi ngefolishi elincane.
3. IVolumu encane. I-Grass pellet iseduze kuphela 1/4 zezinto zokwenziwa ezivolumu ezikufanelekele ukugcinwa nokuhamba. Ngaphezu kwalokho, uthuli oluncane luyasiza empilweni yabantu nasezilwaneni.
4. Ukuze ukhuphule ukuqina futhi uthuthukise ikhwalithi yedliwayo.
Ngokwesibonelo, i-sweet clover ine ukunambitheka kwe-coumarin okuyinto imfuyo engayithandi kangako noma ngaphansi. Noma kunjalo, iba omunye umdwebo ngokuqina okuqinile kanye nenani lomsoco eliphakeme.
5. Ukusabalalisa umthombo wokudla
njenge caragana, i-quinoa efanelekile, hedysarummaxim. I-Etc enamagatsha awugqinsi iphendukela kuklaba oluhle uma selusetshenzisiwe kuma-pellets otshani ngemuva kokuchotshozwa. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo wesibili wezinye izitshalo njengegobolondo lokuqothula, utshani kanye nazo zonke izinhlobo zamaqabunga nazo zingacutshungulwa zibe ama-pellets otshani bese zondla imfuyo nezinkukhu.
Ipharamitha yobuchwepheshe beGrass Pellet Mills
Ividiyo yengca ye-pellet yotshani